westernnepal.com - Surkhet, Nepal
State/Province/Region Travel Agency
खोज, संरक्षण र पर्यटनलाई संगसंगै लादै मध्यपश्चिम निर्माणको एउटा नयाँ प्रयास ।
खोज, संरक्षण र पर्यटनलाई संगसंगैलादै मध्यपश्चिम नेपाल निर्माणको एक नयाँ प्रयास
Stop Planning, Start Traveling. पहिला देश अनि विदेश । – नेपाल पर्यटन बोर्ड
यो नेपाल पर्यटन बोर्डको भनाई हो । कुरो पनि सही हो । हामीलाई आफ्नो घरको बारेमा थाहा छैन, यसलाई व्यवस्थित गर्नतर्फ लागेका छैनौँ, तरपनि हामी अरुको घरआगन घुम्न जान्छौ । जहाँ हाम्रो कुनै मान, सभ्यता हँुदैन । कसैले हाम्रो विस्तृत परिचय सुन्न चाहन्न ।
भनाईमा मात्र देशप्रतिको माया देखाउने हामी, अरुको सभ्यताका गुलाम बनि सभ्य खुटिन्छौ । पुर्खाले कमाएको सम्पत्ति र नामैमा हामी छाति फुल्याउँदै हिड्ने गरेका छौ । तर, काममा भने शुन्य छौँ ।
नेपाल, वीर गोर्खालीको नामले परिचित, तर कतिपयले सगरमाथाको देश भनेर पनि चिन्नेगर्छन् । सम्पदा, जो हाम्रो देशमा अवस्थित छन् । जसले हामीलाई संसारमै परिचित बनाए, शिर ठाडो बनाए । तर आजको समयमा हामीले यस्ता सम्पदाहरुको प्रचारप्रसार, सही व्यवस्थापन तथा सही संरक्षण गर्न सकिरहेका छैनौँ । देशमा दिनहँु बन्द, हड्ताल, चक्काजाम हुने गर्छ ।
देशको स्थिति अहिले यस्तो छ । समस्याहरु धेरै भएतापनि प्रमुख रुपमा बेरोजगारी समस्यानै देखापरेको छ । जो दिनप्रतिदिन बढ्दै गईरहेको पनि छ । अझैपनि हामी, सरकारले केही गरेन भन्छाँै । बच्चाको आमालाई पनि थाहा हुँदैन कि बच्चालाई भोक लाग्यो भनेर । बच्चाले आफ्नो आमालाई बरु रोएरै भोकलागेको जानकारी किन दिन नपरोस् । अनि मात्र आमालाई पनि थाहा हुन्छ कि, समयमै केही खुवाउनुप¥यो ।
यो भनेर मैले देशमा बेरोजगारी समस्या छ भनी सरकारलाई जानकारी नभएको भन्न खोजेको होईन । लाटोलेझै केरा कसबेला पाक्ला अनि खाउला भनि हेर्नु भएन, भन्न मात्र खोजेको हुँ । केरा खानुनै छ, औषधी राख्नेकी खातमा हाल्ने, यो सोच्ने र गर्ने विषय हो । राज्यलाई दोष नदिई यदि हामी आफैले आ–आफ्नो स्थानबाट अधिक तथा नौला प्रयासहरुको थालनी ग¥यौँ भने सायद सरकार बाध्य हुनेछ, केही गर्नको लागि ।
देशमा यही बेरोजगारी समस्यालाई अंगाली केही दलालहरुकै कारण पनि भष्ट्राचार मौलाएको छ । सायद योग्यता भन्दा बढिको आसा गर्ने हाम्रो बानीका कारण पनि देशको यो स्थिति भएको हुनसक्छ । जसका कारण अहिले हामीलाई हाम्रो योग्यता अनुरुपको जागिर पाउन पनि मुस्किल परिरहेको छ । घुसबिना, जिवनयापन योग्य जागिर पाउन असम्भव हुनथालिसक्यो । जसकारण विदेशमा कतिपयले भाँडा माझेर हात कुहाउँदै नेपालमा आफ्नी श्रीमतीको हातमा मेहेन्दी लगाउने गर्छ
Punam B.C. www.punambc.blogspot.com
Lekali travels tours & busniess center
Forest Hideaway Hotel & Cottages Pvt.Ltd
Thakurdwara, Bethani, Bardia, 00977, Nepal
Bardiya, Bardia, Nepal
Bardiya National Park, Bardiya
Brothers Holiday Travels & tours
Ramarosan Tourism Area रामारोशन पर्यटन क्षेत्र
Achham, Achham, 091, Nepal
Rapti Sarbajanik Yatayat
Tulsipur Dang, Dang, 22400, Nepal
Lumbini State, Nepal
Lumbini,Nepal, Dang, 00977, Nepal
State/Province/Region, Historical Place
दाङ तुल्सिपुर, Dang, Nepal
Borough, Cafe, Travel Agency